beauty secret – Page3– Healthy Life Journal
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— လည်ပင်းနဲ့ ရင်ဘတ်အရေပြားက မျက်နှာအရေပြားလိုပဲ ထိလွယ်ခိုက်လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးအများစုက မျက်နှာအရေပြားကိုပဲ ဂရုစိုက်ပြီး လည်ပင်းအရေပြားကို အလေးမထားတတ်ကြပါဘူး။ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ လည်ပင်းမှာ အရေးကြောင်းကြီးငယ်တွေ ထင်တတ်တာကြောင့် အမြန်သက်သာလျော့ပါးစေမယ့် အလွယ်နည်း ၇ သွယ်ကို...
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဆီး(ဇီး)ဖျော်ရည်က ဝမ်းချုပ်သက်သာစေတဲ့ အိမ်တွင်းဆေးတစ်လက်ပါ။ ဆီးဖျော်ရည်သောက်တာအပြင် လိမ်းပေးတာကြောင့် အသားအရေအတွက် ကောင်းကျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ရေဓာတ်ပြည့်ဝစေရန်အတွက် ဆီး(ဇီး)ဖျော်ရည်ကို ဂွမ်းစလေးနဲ့တို့ပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ သုတ်လိမ်းပေးပါ။ အချိန် ၁၅-၂၀ မိနစ်ကြာမှ ရေနဲ့ဆေးချလိုက်ရင် အသားအရေ...
အကောင်းဆုံးအကျိုးရလဒ် ရရှိဖို့အတွက် အုန်းဆီစစ်စစ်ကို အခန်းအပူချိန်မှာထားပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆံကေသာထိန်းသိမ်းမှု (၁) ဆံပင်ချောမွေ့ တောက်ပြောင်စေခြင်း ဆံပင်အရင်းကနေ အဖျားအထိ အုန်းဆီလိမ်းပြီး ဘီးနဲ့ဖြီးကာ တဘတ်စနဲ့ အုပ်ပေးပါ။ အချိန် ၁၅ မိနစ်ထားပြီးမှ ခေါင်းလျှော်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၂) ဗောက်ကုသမှု...
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— အစိမ်းရောင်စပျစ်သီး အစိမ်းရောင်စပျစ်သီးမှာ အိုမင်းမှု ဟန့်တားပေးတဲ့ ရက်စ်ဗာရထရောဓာတ် ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို နုပျိုတင်းရင်းစေပါတယ်။ ဘယ်လို အသုံးဝင်သလဲ အစိမ်းရောင်စပျစ်သီးကို ပျားရည်၊ ဒိန်ချဉ်တွေနဲ့ ရောပြီး အရေပြားပေါ် သုတ်လိမ်းပေးတာကြောင့် အဆီပြန်တာနဲ့ ဝက်ခြံပေါက်တာကို လျော့ပါးစေကာ...
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှစ၍ အသက်ကြီးသည်အထိ အရွယ်အလိုက် မိတ်ကပ်ပြင်နည်းများ
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— မိတ်ကပ်ကို အရွယ်အလိုက် စနစ်တကျ လိမ်းတတ်တယ်ဆိုရင် မျက်နှာပေါ်က အပြစ်အနာအဆာတွေကို ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ရုံသာမက မျက်နှာကို လန်းဆန်းလှပ ကြည့်ကောင်းစေပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါ အရေးကြီးဆုံးအချက်က အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်အောင် ပြင်တတ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ပြင်တာနဲ့ အသက်...
ဂျပန်လူမျိုးများ ခန္ဓာကိုယ်သွယ်လျရခြင်း လျှို့ဝှက်ချက် ၇ ရပ်
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— ဂျပန်အမျိုးသမီး သုံးရာခိုင်နှုန်းခန့်ကသာ အဝလွန်နေကြပြီး ကျန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေက ခန္ဓာကိုယ်သွယ်လျ လှပနေကြကြောင်း လေ့လာမှုတွေအရ သိရပါတယ်။ သူတို့မှာ ဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေ ရှိနေလို့ ဒီလိုသွယ်လျ လှပနေရသလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်။ လျှို့ဝှက်ချက် (၁) သူတို့က ငါး၊ ပဲပိစပ်၊...
လည်ပင်းမည်းနေလျှင် . . .
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တချို့လူတွေမှာ မျက်နှာလေးဖြူပြီး လည်ပင်းအသားအရေက ညိုမည်းကာ ကြမ်းတမ်းနေတတ်ပါတယ်။ အဖြစ်များရတဲ့ အကြောင်းရင်းက တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးမကောင်းတာ၊ လည်ပင်းအရေပြားကို ဂရုတစိုက် ထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းတာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လည်ပင်းအရေပြား ညိုမည်းကြမ်းတမ်းနေရင် ကြေးချွတ်တာကို လုပ်နိုင်တာကြောင့် အသားအရေ...
မျက်ကွင်းညိုတာက အလှအပကို ဖျက်ဆီးနေတာ အသေအချာပါ။ မိတ်ကပ်တွေနဲ့ဖုံးလည်း ပင်ပန်းသလို၊ ရင့်သလို ထင်ရစေပါတယ်။ ကွန်ဆဲလ်လာလိမ်းတာက ချက်ချင်းဖြေရှင်းနည်းလို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် မျက်နှာသစ်လိုက်တာနဲ့ မျက်ကွင်းညိုနေပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိတ်ကပ်မလိုဘဲ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ အိမ်မှာပြုလုပ်နိုင်မယ့် အိမ်တွင်းကုထုံးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မျက်ကွင်းညိုတာအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းက ပူဒီနာ(ပူစီနံ)ရွက်တွေ...
ရေမွှေးကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ ဆွတ်သင့်သလဲ . . .
———၊ လရိပ်မေ ၊——— ရေမွှေးဆွတ်သင့်တဲ့ အကောင်းဆုံးနေရာက ခန္ဓာကိုယ်ကနေ သဘာဝအတိုင်း အပူထွက်တဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဆိုရင် • မေးရိုးအောက် • လည်ပင်း • ပခုံး • ရင်အုပ်နေရာ • လက်တံတောင်အတွင်းဘက် •...